ဗကပ နိဂုံး – Min Thayt
Min Thayt May 13, 2021 May 13, 2021
• The Rise and Fall of The Communist Party of Burma by Bertil Lintner
• ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နေထွက်ချိန် နှင့် နေဝင်ချိန်
• ကျော်ဝင်း (ဘာသာပြန်)
• လွင်ဦး စာပေ၊ ၂၀၁၃ ၊ ပထမအကြိမ်။
၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့။ ရန်ကုန်မြို့၊ ဘားလမ်းရှိ တိုက်ခန်းငယ်လေး တစ်ခု။ တို့ဗမာအစည်း အရုံး အဖွဲ့ဝင် လူငယ်ကျောင်းသား တချို့နဲ့ လက်ဝဲယိမ်း မျိုးချစ်လူငယ်တစ်စု။ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း ပဲခူးရိုးမ၊ ပျဉ်းမနား ခရိုင်။ ထို့နောက် အရှေ့မြောက်ဒေသ မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း။
မြေပေါ် - မြေအောက်။
တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ်။
ဝ ကိုးကန့် လူမျိုးစုတို့ အခြေချ နေထိုင်ရာ ပန်ဆန်း။
နိဒါန်း နဲ့ နိဂုံး။
နေထွက်ချိန် နဲ့ နေဝင်ချိန်။
အာရုဏ် နဲ့ ဆည်းဆာ။
အနိမ့်အမြင့် ၊ အတက်အကျ၊ လောကဓံတရားများနဲ့ လူတိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်း ကြုံတွေ့ရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန် ပါဝင် ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဘာ့ကြောင့် စစ်အေးကာလ အဆုံးသတ်ကာလမှာပဲ၊ တောင်ပေါ်မြို့လေး တစ်မြို့ မှာ ပါတီတွင်း တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုကြောင့် နိဂုံးချုပ်သွားရသလဲ….။ အကြောင်းတရားက ဘာလဲ။ ဖြစ်နိုင်ချေ များ မြောက်မြားစွာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းတရားတို့ စုဆုံလာတဲ့အခါ၊ အကျိုးတရားတို့ ချက်ချင်း လက်ငင်း အကျိုး ပေးကြပါတယ်။
အံ့ဩစရာကောင်းတာက အချိန်အားဖြင့်၊ ကာလအားဖြင့်။ တိုက်ဆိုင်လွန်းလိုက်တာ။ ၁၉၈၈ ၊ ၁၉၈၉ ၊ ၁၉၉၀ ကာလတွေဟာ ဘာတွေလဲ။
• ဘာလင်တံတိုင်း ပြိုတဲ့အချိန်။ (ဂျာမနီမှာ…)
• စစ်အေးကာလ နိဂုံးချုပ်တဲ့အချိန်။ (ကမ္ဘာမှာ…)
• ဆိုဗီယက် ယူနီယံ ပြိုကွဲတဲ့အချိန်။ (ဆိုဗီယက် ရုရှားမှာ…)
• ၈၈ လူထုအုံကြွမှု ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်။ (မြန်မာပြည်မှာ…)
• ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ သေဆုံးတဲ့အချိန်။ (မြန်မာပြည်မှာ…)
• တီယံမင် အရေးအခင်း ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်။ (တရုတ်မှာ…)
• ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု ဖြစ်တဲ့အချိန်။ (ပန်ဆန်းမှာ…)
• သည့်နောက် …. ဗကပ နိဂုံးချုပ် ချိန်။
မုချ တရားတို့ အောင်ပွဲမခံဘဲ၊ ကျရှုံး နိဂုံးချုပ်ရတဲ့အခါ တစ်ခါက မာန်တင်း ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ ဘယ်လို အံကြိတ်ခဲ့ပါသလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို အကြိမ်ကြိမ် မေးရပါလိမ့်မယ်။ အစ ရှိရင် အဆုံး ရှိမယ်။ နိဒါန်း ရှိရင် နိဂုံး ရှိမယ်။ နေထွက်ချိန် ရှိရင် နေဝင်ချိန် ရှိမယ်။ ဒုက္ခ ရှိရင် သုခ ရှိမယ်။ အမြင့် ရှိရင် အနိမ့် ရှိမယ်။ အောင်မြင် တာရှိရင် ကျရှုံးတာ ရှိမယ်။ အတက်ရှိရင် အကျ ရှိမယ်။ အကြောင်း ရှိရင် အကျိုး ရှိတယ်။
အကြောင်းဟာ ဘာလဲ….။ အကျိုးဟာ ဘာလဲ….။ ဖြစ်နိုင်ချေက ဘာလဲ။ ဖြစ်နေတာက ဘာလဲ။ ဖြစ်ခဲ့တာက ဘာလဲ။ ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားတွေက ဘယ်လိုလဲ။ မေးခွန်းတွေက ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို နားလည်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေရှာခြင်းဟာ အသိဉာဏ် ဖြစ်ထွန်းမှုကို ကျေးဇူးပြု ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။
ဘာတဲလ် လစ်တနာ (၁၉၅၃ – )
• ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် မွေးဖွား။
• ၁၉၇၅ – ၇၉ ၊ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း လှည့်လည်သွားလာခဲ့။
• ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အခြေချနေထိုင်ပြီး ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်။
• ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဇနီးသည် ဆိုင်းနောင့်နှင့်အတူ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ဒေသတို့ကို ခရီးသွားလာ၍ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် အင်အားစု နယ်မြေများတွင် ကိုယ်တိုင်သတင်းရယူပြီး စာများရေးသားခဲ့။
• ဤခရီးစဉ်၌၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ဌာနချုပ်နှင့် တပ်စခန်းများတွင် သွားရောက်၍ လေ့လာခဲ့။
ဘာတဲလ်လစ်တနာကို မြန်မာပြည်ရဲ့ အဂ္ဂစနိုးလို့ ကျနော် သမုတ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ တစ်ခုတည်း ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ဝဲယိမ်းပါတီတွေ မြောက်မြားစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလတစ်လျှောက်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ လက်ဝဲယိမ်းပါတီတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲသည့်အထဲမှာ၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ နာမည်ကြီးတယ်။ အထင်ကရဖြစ်တယ်။ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ ဟာ သခင်စိုးခွဲထောင်တဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်) လို့ နာမည်တပ်တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီကတော့ အစကနဦးကတည်းက။ သခင်စိုးက သခင်သန်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့ နှောင်းပိုင်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီကို သမုတ်တာက အလံဖြူကွန်မြူနစ်ပါတီ တဲ့။ အလံနီ။ အလံဖြူ။ မြန်မာပြည်မှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ မျိုးကွဲ နှစ်ခု။
ဘာတဲလ်လစ်တနာဟာ ဆွီဒင်လူမျိုး ဂျာနယ်လစ် (သတင်းစာဆရာ) တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ဘာတဲလ်ဟာ မြန်မာ ပြည်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ကျင်လည်ရင်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်းပိုင်းအထိ ဝင်ရောက်လေ့လာ၊ ဝင်ထွက် ရခဲ့သူဖြစ်တယ်။ တောတွင်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တွေနဲ့ ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ပေါ်လစ်ဗြူရိုတွေနဲ့ အနီးကပ်တွေ့ဆုံနေထိုင်ပြီး ဗကပကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီးတော့၊ မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနယ်တွေထဲက လူမျိုးစုပါတီတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့သူ။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း စာအုပ်တွေ များစွာ ထွက်တယ်။ ဘာတဲလ်လစ်တနာဟာ နိုင်ငံခြားသားပေမယ့် မြန်မာ့ရေမြေပေါ်မှာ နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့တာ များစွာ ကြာပြီ။ စာအုပ်အနေနဲ့ရော၊ ဆောင်းပါးအနေနဲ့ရော များများပြားပြားရေးသားခဲ့တာ၊ အရေအတွက် အားဖြင့် ဒုနဲ့ ဒေး။ ပြီးတော့ ဘာတဲလ်လစ်တနာရဲ့ ဇနီးဟာ မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသား။ ဆိုင်းနောင့်။ နောက်တော့ ဆိုင်းနောင့်လစ်တနာ။
ဘာတဲလ်လစ်တနာ ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်စာရင်း
၁) The Rise and Fall of Communist Party of Burma (1990)
၂) Outrage: Burma’s Struggle for Democracy (1995)
၃) The Kachin: Lords of Burma’s Northern Frontier (1997)
၄) Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948 (1999)
၅) Burma in Revolt: How Burma Became the World’s Biggest Heroin Producer (2000)
၆) Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle (co-authored with Michael Black) (2009)
၇) Great Leader, Dear Leader: Demystifying North Korea Under the Kim Clan (2005)
၈) Land of the Jade: A Journey from India through Northern Burma to China (2011)
၉) World.Wide.Web: Chinese Migration in the 21st Century – and How It will Change the World (2011)
၁၀) Great Game East: India, China and the Struggle for Asia’s Most Volatile Frontier (2012)
ဘာတဲလ်လစ်တနာ ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တချို့ကို နိုင်ငံခြားဘာသာအမျိုးမျိုး ပြန်ဆိုကြတာ ရှိတယ်။ အဲသည့်အထဲ က၊ မြန်မာဘာသာပြန်တွေလည်း ထွက်တယ်။ Outrage ကို ဒေါမာန်ဟုန် နာမည်နဲ့ စံဝင်းမောင်နဲ့ မင်းမျိုးနိုင်က ဘာသာပြန်ပြီး ဒဿနပါမောက္ခ မောင်ကြည်သစ်က တည်းဖြတ်တယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ၊ ဘာသာပြန်ထွက်လာ တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန် စာအုပ်ကို ကျော်ဝင်း ဘာသာပြန်တယ်။ ပထမအကြိမ်ထုတ်ကို လွင်ဦးစာပေက နေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိ ပုံနှိပ်တယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ၊ မင်းအောင်မင်းက ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတက်နှင့် အကျ ဆိုပြီး ပထမအကြိမ် ထပ်မံ ဘာသာပြန်ဆိုတယ်။ Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948 စာအုပ်ကို စည်သူကျော်က ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ဘာသာပြန်ပြီး ထုတ်ဝေတယ်။ Merchants of Madness စာအုပ်ကို ခွန်လှိုင်း ဘာသာပြန်ပြီး ၂၀၁၇ မှာ ပထမအကြိမ်ထုတ် ထွက်လာတယ်။ နိုင်ဦးက ဘာတဲလ်လစ်တနာရဲ့ စာအုပ်သုံးအုပ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး ထုတ်ဝေ ခဲ့ဖူးတယ်။ အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗမာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ (၂၀၁၂၊ ကျောက်စိမ်းမြေ – အိန္ဒိယမှ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်၍ တရုတ်ပြည်သို့ ခရီးကြမ်း (၂၀၁၄)၊ ဂရိတ်ဂိမ်း – အရှေ့စူပါပါဝါ ပဋိပက္ခအတွင်းမှ ဂိမ်းပလေယာ မြန်မာ (၂၀၁၆) …. တို့ဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့်၊ ဘာတဲလ်လစ်တနာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးသမိုင်းကို အချက်အလက်အထောက် အထား ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရေးသားတင်ပြပါတယ်။ ဘာတဲလ်ဟာ သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်။ စာရေး ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ ပြောရင်လည်း မှန်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း၊ ဘာတဲလ်ဟာ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့်၊ ဘာတဲလ်ဟာ လက်နက်ကိုင်လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အကြောင်းကို ခြေခြေမြစ်မြစ်နားလည်တယ်။ ဂဃနဏ နားလည်သဘောပေါက်ထားသူဖြစ်တယ်။ သူဟာ secondary sources လို့ခေါ်တဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသား အချက်အလက်ရင်းမြစ်တွေကို အားကိုးပြီးတော့၊ စာတွေ ရေးနေသူ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဆင့်ခံ သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေ စာတွေ ရေးနေသူ မဟုတ်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ခြေထောက်နဲ့ ခရီးသွားလာပြီးတော့၊ အောက်ခြေအဖြစ်အပျက်တွေကို ကွင်းဆင်း လေ့လာတယ်။ တကယ့်လှုပ်ရှားနေသူ၊ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့တယ်။ မေးမြန်းတယ်။ အင်တာဗျူးတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာတမ်းတွေကို ရှာပြီး လေ့လာတယ်။ အချက်အလက်တွေကို မူရင်းရင်းမြစ်အထိ နှိုက်ထုတ်ပြီး ရေးသားနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်တယ်။ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သတင်းသမားဘဝကနေ၊ ပညာရှင် အဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်တဲ့လူလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ဘာတဲလ်ဟာ ဆင်စွယ်နန်းမှာ နေထိုင်ပြီး ရေးရာတွေကို သုံးသပ်ရေးသားနေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် စာရေးဆရာ ပညာရှင် မဟုတ်ဘူး။ ဘာတဲလ်ဟာ အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ကိုယ်တိုင် ကျင်လည်ပြီး လေ့လာဆည်းပူးပြီး စာတွေ ရေးသားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပညာရှင်အသီးသီးဟာ ဘာတဲလ်ရဲ့ စာအုပ်တွေကို ငြင်းဆန်ဖို့ ခက်တယ်။ ပယ်ရှားဖို့ ခက်တယ်။ စာရေးဆရာ ဆိုတာ လေဖမ်းဒန်းစီးပြီးတော့ သူများရေးပြီးသားစာတွေ ဖတ်ပြီး၊ သံယောင်လိုက် ရေးလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို လူတွေ ရှိတယ်။ အဲသည့်အထဲမှာ ဘာတဲလ် မပါဘူး။ ဘာတဲလ်ရဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေ ဟာ (အင်) မဟုတ်ဘူး။ အတု မဟုတ်ဘူး။ အောက်ခြေက ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ကျင်လည်ခဲ့သူတွေနဲ့ စာပေ မှတ်တမ်း တွေကို နှိုင်းယှဉ်ချင့်ချိန်ပြီး ရေးသားတဲ့စာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တန်ဖိုးအားဖြင့် မြင့်မားတယ်။ ဘာတဲလ် ဟာ ဒီလို လူ။
ဘာတဲလ်စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်သူက (ဆရာ) ကျော်ဝင်း။ ကျော်ဝင်းဟာ၊ ကွန်မြူနစ်ဟောင်း တစ်ယောက်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ။ သူက တော်လှန်ရေးသမား။ ပြီးတော့ စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ့ အရေးတွေကို ဂလိုဘယ်အိုင်ဒီယာ သီအိုရီတွေနဲ့ ချိန်ညှိပြီးတော့၊ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါး အမြောက်အမြား ရေးနေ တဲ့သူ။ နိုင်ငံရေးသုတေသီ တစ်ယောက်လို့ ပြောရင်လည်း မမှားဘူး။ ကျော်ဝင်းဟာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း၊ လက်နက်ကိုင်တောခိုတဲ့ ကွန်မြူနစ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းကျမှ မြေပေါ် ပြန်ရောက်ပြီး ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ အဖြစ် စွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်လို့ ပြောရင် မမှားဘူး။ မြန်မာပြည်က ကွန်မြူနစ်တွေက ကျော်ဝင်းကို သစ္စာဖောက်စာရင်းသွင်းတယ်။ ပြီးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်တယ်။ မြန်မာစာရေးဆရာတွေဟာ လက်ဝဲသန်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ အဖြစ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ကျော်ဝင်းကို မျက်စိဆံပင်မွှေးစူးနေတယ်။ ဘာတဲလ်လစ်တနာရဲ့ စာအုပ်ကို ကျော်ဝင်းက ဘာသာပြန်တယ်။ ဘာသာပြန်အဖြစ် နှစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန်။ ကျော်ဝင်းဟာ ဗကပ (ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) အပေါ် သံယောဇဉ် မပြတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တောတွင်းက ကြုံခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို သင်ခန်းစာ ယူဖို့ သူ စာတွေ ရေးခဲ့ ဟန်တူတယ်။ ကျော်ဝင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတွေထဲမှာ၊ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့၊ သူ သိမြင်နားလည်ခဲ့ရတဲ့ တော်လှန်ရေးအမှားတွေကို မကြုံရစေဖို့၊ သတိပေးချက်တွေ ထည့်ရေးတာ တော်တော်များများ ဖတ်ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီထဲမှာ တကယ့်လူတော်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို သူ ဖော်ထုတ်ပြီး ရေးတယ်။ တရုတ်ရဲ့ တော်လှန်ရေး တင်ပို့မှုတွေကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဗမာ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ တရားသေဝါဒ ရလဒ် အဖြစ် မှားယွင်းခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အမှားတွေကြောင့် ကွန်မြူနစ်တွေထဲက လူတော်တွေ ဖြုတ်-ထုတ်-သတ် ထဲမှာ ပါခဲ့တာကို ကျော်ဝင်းက ယူကျုံးမရ ဖြစ်ဟန်တူတယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ပဲခူးရိုးမထဲမှာ ဖြုတ်ထုတ် သတ်လမ်းစဉ်ကို လျှောက်ခဲ့ပြီး အမှားကြီးတွေ မှားယွင်းခဲ့တယ်။ လက်ဟောင်းကွန်မြူနစ်တွေဟာ ဗကပ မှားခဲ့ တဲ့ အမှားတွေကို တချို့ဝန်ခံပေမယ့်၊ ဒါဟာ တော်လှန်ရေးအတွက် လုပ်ရတာဖြစ်လို့ ဖြစ်သင့်တဲ့ အမှား၊ လက်ခံ လို့ရတဲ့ အမှားလို့ ခပ်ဖွဖွ လက်ခံယူကြတယ်။ ဒါဟာ ဗကပ မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေအပေါ် ပျားရည်နဲ့ ဝမ်းချ လိုက်ခြင်း လားလို့ မေးစရာရှိတယ်။ ဒီလို အချက်တွေကို ဆွီဒင်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ ဘာတဲလ်လစ်တနာဟာ မချန်လှပ်ခဲ့ဘူး။ ကျော်ဝင်းဟာ ဘာတဲလ်ရဲ့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပေါ်ထွက်လာချိန်နဲ့ ကျဆုံးချိန် အကြောင်း စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။
• ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား။
• စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့ဇာတိ။
• မွေးချင်း (၇) ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား။
• မြန်မာလူထုအား လစ်ဘရယ်အိုင်ဒီယာများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူ။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ စာရေးဆရာ ကျော်ဝင်းရဲ့ NLD ခေတ် ပထမနှစ် စာအုပ်ရဲ့ စာရေးသူ အမှာ (ရာဇဝင်ကို ဖြတ်သန်းခြင်း) မှာ အခုလို ရေးတယ်။
• မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် အရေးကြီးသော လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး နှစ်ခုရှိသည်ဟု ထင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ၊ ကိုလိုနီခေတ်က ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော ထောင့်သုံးရာပြည့် အရေးတော်ပုံ (တနည်း) ၁၉၃၈ – ၃၉ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း၊ တိုင်းပြည်၏ အခြေခံလူတန်းစားများဖြစ်ကြသော၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများနှင့် ပညာတတ်ကျောင်းသား လူငယ်များ လက်တွဲမိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အရေးတော်ပုံကြီး၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကို တွက်ဆကြည့် လိုက်လျှင်၊ အနည်းဆုံး အောက်ပါ အခြင်းအရာ သုံးရပ်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်ဟု သဘောရပါသည်။ ဤသည်တို့မှာ ……၊
၁။ အရေးတော်ပုံကြီး၏ နောက်ကွယ်မှ ဒဿနတွန်းအားမှာ၊ မက်္ခဝါဒ (ထိုစဉ်က အခေါ်အဝေါ်အတိုင်း ဆိုလျှင် ဘုံဝါဒ နောင်တွင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဖြစ်သည်။
၂။ အရေးတော်ပုံကြီးက မွေးထုတ်ပေးလိုက်သည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုမှာ၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPB) နှင့် နောင် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီဖြစ်လာမည့် underground unit တို့ဖြစ်သည်။
၃။ အရေးတော်ပုံကြီးက၊ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သည့် တိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်မှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်သည်။
ဘာတွေလဲ…. ဘယ်လိုလဲ …
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းမှာ အထင်ကရ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရ အသက်ရှည်သော်ငြားလည်း၊ မြေအောက်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုဟ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ။ ဒီအကြောင်းအရာ တွေကို ဘာတဲလ်ဟာ စိစိစစ်စစ် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဝ၊ ကိုးကန့် လူမျိုးစုတွေ နေထိုင်ရာ တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်တဲ့ ပန်ဆန်းမှာ ဌာနချုပ်အနေနဲ့ ခြေကုတ်ယူပြီး စစ်အေးကာလ နိဂုံးမှာပဲ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုနဲ့ ပြိုကွဲကျဆုံးသွားရတယ်။ ဗကပရဲ့ နိဂုံးဟာ ဘယ်လိုလဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ပြင်ပ အကြောင်းတရားက ဘာတွေလဲ၊ အတွင်းက အကြောင်းတရားတွေက ဘာတွေလဲ။
လူမျိုးစုဒေသအတွင်း ခြေကုတ်ယူခဲ့ရာက၊ ဗမာနိုင်ငံရေးသမားကွန်မြူနစ်ဝါဒီတွေနဲ့ ဘာသာစကား တိုးမပေါက် တဲ့ ဝ၊ ကိုးကန့်လူမျိုး အောက်ခြေကွန်မြူနစ်တပ်သားတွေ အကြားမှာ၊ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှု အားနည်းချို့ယွင်းခဲ့တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဆိုဗီယက်ရုရှားက တော်လှန်ရေးတွေနဲ့ တရုတ်က မော်စီတုန်းတို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးဒဿနနည်းနာတွေကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခဲ့တယ်။ အဲသည့်က အမှားတွေက ဘာတွေလဲ။ မော်စီတုန်းက တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို လုပ်နေခဲ့စဉ်က၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူ နစ်ပါတီကလည်း ပဲခူးရိုးမထဲမှာ တရုတ်နည်းနာတွေကို ကူးယူ၊ အတုခိုးခဲ့တာပဲ။ အဲသည့်ထဲက အမှားတွေက ဘာတွေလဲ။ အမှန်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဘာတဲလ်ရဲ့ စာအုပ် ဘာသာပြန်တစ်အုပ်တည်းနဲ့ မရဘူး။ ရဲဘော်ဘခက် ရေးတဲ့ သခင်သန်းထွန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ စာအုပ်ကို ထပ်ပြီး ရှာဖတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့၊ ထို့ကြောင့်….ဤသို့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ သက်ထားဘသိန်းတင်က ပြန်လည် ချေပ ရေးသားချက်တွေ အပါအဝင် တချို့သော ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံရေးသမား စာရေးဆရာတွေ ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ရှာဖတ်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲသည့်အထဲမှာ၊ မင်းလတ်ရဲခေါင်ရဲ့ အကြောင်းကို တွေ့ရင်လည်း သတိထားပြီး ဖတ်။ ဒီလိုနဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံက နားလည်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
တရုတ်ရဲ့ အထောက်အပံ့ခံအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဗကပ။ တရုတ်က တိန့်ရှောင်ဖိန် တက်လာတော့၊ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲကြောင့် ပြည်ပက ကွန်မြူနစ်မဟာမိတ်တွေကို အထောက်အပံ့တွေ ဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဘယ်လို ရပ်တည်ခဲ့ရသလဲ။ လိုအပ်တဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းကို ဘယ်လို ဝယ်သလဲ။ ဝယ်ဖို့ ငွေ၊ ပိုက်ဆံကို ဘယ်ရ ရသလဲ။ ဝ၊ ကိုးကန့် ဒေသဟာ အခုအချိန်အထိ ဘိန်းစိုက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို (မလွှဲမရှောင်သာ) ခွင့်ပြုခဲ့ရ။ တစ်ဖက်မှာလည်း အိုင်ဒီယော်လိုဂျီရဲ့ အားနည်းချက်။ စစ်အေးခေတ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ၊ လွန်ဆွဲ အားပြိုင်လာတဲ့ အရင်းရှင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လက်ဝဲကွန်မြူနစ်ဝါဒ အကြားက အားပြိုင်မှုတွေနဲ့ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီရဲ့ အားနည်းချက်တွေ။ ပါတီတွင်း ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြင်သဘောထား။ ခေတ်ကာလအားဖြင့် ပြောင်းလဲလာပေမယ့်၊ ပြောင်းလဲမှုကို မလိုက်ပါနိုင်ဘဲ တောတွင်းမှာ ရှေးရိုးကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့ရဲ့ စဉ်းစားချက်တွေအတိုင်း။ စစ်အစိုးရဖြစ်တဲ့ နေဝင်း အစိုးရနဲ့ တောတွင်းက တိုက်ပွဲတွေ။ လက်နက်အင်အားကို အသာစီးမယူဘဲ၊ လူပေါလို့ လူလိုင်းလုံးစစ်ဆင်ရေး တွေရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်…. စသည်ဖြင့်။ ကမ္ဘာမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်ကဲ့သို့လဲ။ မြန်မာ မှာရော ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်ကဲ့သို့လဲ။ ကွန်မြူနစ်ကေဒါတွေဟာ ဘယ်လောက် သန်မာသလဲ။ သန်မာမှုက အနိုင်ရသလား။ သို့တည်းမဟုတ် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးလား။ ခေတ်ကို ကြည့်နိုင်တဲ့ အမြင်ဟာ ဘယ်လိုလဲ။ ခေတ်ကာလမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ နိဂုံးချုပ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသလား။ ဒါတွေကို လေ့လာဖို့၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တစ်ကွက်ချင်း တစ်ပိုင်းချင်း ဂဃနဏ နားလည်ရပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ သမိုင်းကို မကျေရင်၊ နိုင်ငံရေးမှာ မပေါက်မြောက်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ အဘိဓမ္မာကို သမိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်တတ်ရတယ်။ အတိတ်ဟာ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့်၊ တနုံ့နုံ့နဲ့ စားမြုံ့ပြန်ပြီး အရသာခံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ခန်းစာ ယူရမှာ ဖြစ်တယ်။ လေ့လာရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆင်ခြင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူ နစ်ပါတီရဲ့ နိဂုံးဟာ ဘယ်လိုလဲ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဟာ နိဂုံးချုပ်ခဲ့တယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီဟာ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ အစိုးရဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာ့ကြောင့် ၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံမှာ နိဂုံးချုပ်ခံရသလဲ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရတစ်ပိုင်း ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အစိုးရကို တောတွင်းလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ တော်လှန် ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဘာ့ကြောင့် တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုနဲ့ နိဂုံးချုပ်ခံရသလဲ။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့…..
• ဂိုရှယ် (ခေါ်) ရဲဘော် ဘတင်
• ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇော (ခေါ်) သခင်ရွှေ
စသည်ဖြင့်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထူထောင်၊ ရှင်သန်၊ ရပ်တည်၊ ကျရှုံးသွားခြင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးထုပ္ပတ်တွေကို ထပ်ပြီး လေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ အဲသည်မှာ အရေးကြီးတဲ့ ဆက်ထုံး တစ်ခု ထပ်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါက ဖုန်ကျားရှင်။
ဖုန်ကျားရှင်ဟာ ကိုးကန့် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အရာရှိတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ ကိုးကန့် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ တပ်မှူးဖြစ်လာတယ်။ ဗကပတပ်တွေနဲ့ ကိုးကန့် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ပူးပေါင်းမှုမှာ ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကိုးကန့် အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တပ်တွင်း ပုန်ကန်မှုကို ညီဖြစ်သူ ဖုန်ကျားဖု နဲ့ လက်တွဲပြီး ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။
အခုတော့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဌာနချုပ် တည်ရှိခဲ့တဲ့ ပန်ဆန်းဟာ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်နေတယ်။ ဝ ဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သလို၊ ကိုယ်ပိုင်တပ်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်တယ်။ အင်အား များပြားတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ၊ အင်အားအကြီးမားဆုံးသော လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် အုပ်စုဖြစ်တယ်။ ဝ လူမျိုးတွေဟာ၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ တရုတ် စကားကို ပြောတယ်။ တရုတ် စာတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်းမှာ ဆိုင်းဘုတ်အမျိုးမျိုး တွေ့နိုင်တယ်။ တရုတ်ပိုက်ဆံ (ယွမ်) ကို သုံးတယ်။ တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ၊ ဘိန်းစိုက်ပြီး ချမ်းသာနေတဲ့ ဒေသ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား၊ ကူးသန်းသွားလာမှု အများဆုံး ဒေသဖြစ်တယ်။ လက်ဖက် မစိုက်ဘူး။ ဘိန်းစိုက်တယ်။ ဘိန်းက ဝင်ငွေ ကောင်းတယ်။ တရုတ် မြန်မာအရေးကို လေ့လာရင်၊ ဝ အရေးကို မလေ့လာဖို့ မဖြစ်ဘူး။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ၊ မြန်မာ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအကြောင်းကို လေ့လာရင် ဝဒေသကို လေ့လာရလိမ့်မယ်။ ဝဒေသရဲ့ မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပန်ဆန်းဟာ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခြေကုတ်ယူခဲ့တဲ့ နေရာဆိုတာ မမေ့ဖို့ ကောင်းတယ်။
ညနေ ၆း၁၆
၂၆၊ ဧပြီ ၊ ၂၀၂၁။
Tagged Armed Struggle, Bertil Lintner, Book Review, Communism, Communist, Communist China, Communist Party of Burma, CPB, Myanmar Book Review, Revolution
Previous post ဖွံ့ဖြိုးရေးရှုထောင့်
Next post တပ်စရိုက်လား…. စစ်ဗိုလ်စရိုက်လား….